amamayela amancane we-pellet asetshenziswa ekhaya,isigayo esincane se-pellet esidayiswayo-umnqobi we-pellet mill
Amandla:3kw,isigaba esisodwa noma izigaba ezintathu
Ikhono:50~ 80kg / h
amamilimitha amancane we-pellet mancane ngosayizi, ukwakheka nesakhiwo esine-50-80kg / h yokwenza ama-feed pellets.imitha amancane we-pellet wokusetshenziswa kwasendlini yisigidi se-pellet esinamandla kagesi 200 mm ubukhulu kufa, izimbobo zokufa zingaba zinhle kakhulu ngosayizi ongathanda. Ungazisebenzisa ukucubungula imfucuza ehlukahlukene yezolimo nehlathi, efana sawdust, ukolweni, utshani, irayisi husk, igobolondo le-kernel yesundu nokunye ukungcola okuningi ku-pellets. Umsindo ophansi, ukusebenza kahle kakhulu nokuguquguquka okuphezulu, lo mshini omncane we-pellet uwumshini wakho ofanele we-pelletizing.Flat die pellet mill uza ngaphambili emakethe kune-ring die pellet mill.the i-pellet mill yasendlini yakhelwe ekuqaleni kwamakhulu eminyaka angama-20 ngokususelwa kuflethi yasofa. Isici saso esiyisisekelo esiyinhloko ukuthi kufa kwaso kuvundlile ngoxhaxha lwama-roller ngaphezulu kwaso. Lapho wenza pellets, izimpuphu zezinto zokusetshenziswa ezingavuthiwe zehla zingene esikhaleni esiphakathi kweflethi efile nabagibeli. Lapho-ke ama-roller ecindezela la makhomphutha emigodini emincane eflethini ayafa ukwenza ama-pellets. Lapho nje kuphuma ama-pellets ngakolunye uhlangothi lwefa, uchungechunge lwemimese izobasika kubude obufanayo bokunquma ngokushesha. Kanjalo, kwenziwa ama-pellets wokugcina ngobude obufanayo. amamayela amancane we-pellet asetshenziswa ikakhulukazi ekusetshenzisweni komuntu ngamunye nasekusetshenzisweni kwasekhaya, njengoba le mpela ye-pellet yasekhaya kulula ukuhamba nokusebenza.
izici ezincane zemishini ye-pellet
1. Ukuqhutshwa yimoto kagesi kuyenza yonge amandla futhi ibe nobungani bemvelo.
2. Ukuthengwa kwe-Ssmall pellet kuyenziwa ngezinto ezingavuniyo ngenxa yalokho kuba nokuphila okude kwenkonzo
3. Inqubo yokuxovula iyabonakala, ngakho-ke kulula ukuxazulula izinkinga ngesikhathi.
4. Isakhiwo esilula, ukumbozwa kwendawo encane, ukusebenza okulula nokunakekelwa.
5. Le mill pellet yasekhaya inokusetshenziswa okuphansi, intengo yokuncintisana nokulondolozwa kwezindleko.
6. Amamilimitha amancane kagesi angakwazi ukucubungula izinhlobo ezahlukahlukene zokusanhlamvu okuqinile kube ngamapayipi amancane wokudla wezilwane ezinjengezinhlanzi, ama-shrimps, inyama yenkukhu, unogwaja, ingulube, njll.
Ukusetshenziswa kweMill Pellet Encane
★ Ifanelekile ukucubungula izinhlobo ezahlukahlukene zokusanhlamvu okuqinile zibe ngamapayipi amancane wokudla wenkukhu njengenkukhu, idada, goose, izigwaca nemfuyo kubandakanya nezinkomo, inkomo, unogwaja, ingulube, njll.
★ Izinkukhu zikagesi ezondla ngogesi ekhaya pellet zithandwa ngesitshalo esincane se-pellet, ipulazi lokufuya, nepulazi lezinkukhu.
Kungani Khetha Okuncane Okuphakelayo Ama-Pellet Mill we-CHICKEN yakho?
Le nkukhu ipha ama-mills amancane we-pelletry epulazini elincane lezinkukhu noma ukusetshenziswa kwasekhaya kwehlukile kwamanye ama-feed we-pellet mill. Kepha inkukhu, zigcinelwa ukukhula okusheshayo nempilo. Ukuphakelwa kwenkukhu kufanele kugcizelele okuqukethwe komsoco nezithako. Sakhe le pelletizer yezinkukhu zasekhaya eyakhiwe ekhaya futhi sagxila ekwandiseni ukuthembeka kokudla kanye nokuqina okungenza ukusheshisa kwenkukhu kube nokuningi kunokwejwayelekile. Yini enye, inkukhu ngezigaba ezahlukahlukene ezikhulayo idinga ama-pellets osayizi ahlukene, ngalo mshini omncane we-pellet, ungenza ama-feed pellets kusuka 2-10 mm, ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene.
I-VTKLP400 30 1000~ 1200 400 1.67*0.63*1.55
Ividiyo yamamayela amancane we-pellet